पत्रपत्रिकामा आजः के के छन् मुख्य समाचार ?
आज प्रकाशित सबै पत्रपत्रिकाहरूमा १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद साग फुटबलमा नेपालको सफलताको तस्वीरले भरिएका छन् भने भव्य समापन समारोह लगाएत हिउँदे अधिवेशनको आह्वानसँगैको नयाँ सभामुखको बन्ने भन्ने विषयमा पनि समाचारहरु प्रकाशित छन् ।
कान्तिपुरमा सागमा फुटबलमा नेपालले पाएको सफलताको आकर्षक तस्वीरसहित समाचार छ । यो समाचार सबै पत्रपत्रिकामा पहिलो पृष्ठमा स्थान पाएका छन् ।
भने सभामुख को ? शिर्षकमा अर्को समाचार छ । राष्ट्रपतिले आगामी पुस ४ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँवानेश्वर काठमाडौँमा अधिवेशन आह्वान गरेकि छन् । यो आह्वानसँगै को बन्ने सभामुख भन्ने नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउन लागेको समाचार अन्नपूर्णले छापेको छ ।
नेपाल समाचार पत्रले पनि साग भव्यरुपमा सम्पन्न, संसद् बैठक ४ पुसमा बस्ने लगाएत पश्चिमी वायुको कारण काठमाडौ. लगाएत देशभर चिसो बढेको समाचार लेखेको छ ।
हेर्नुस् आजको पत्रपत्रिको फ्रन्टपेजः